ओली र विप्लवको भोलि २ बजे संयुक्त सम्बोधन, ओलीको ‘सरप्राईज’ राजीनामा आउनसक्ने ! « रिपोर्टर्स नेपाल
ओली र विप्लवको भोलि २ बजे संयुक्त सम्बोधन, ओलीको ‘सरप्राईज’ राजीनामा आउनसक्ने !
काठमाडौं, २० फागुन । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहबीच आज तीन बुँदे सहमति भएसँगै नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । सरकारले विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन ठूलो सफलता हाँसिल गरेको छ । यसअघि विखण्डनवादी आरोप लागेका सिके राउतलाई पनि सरकारले सरप्राईज रुपमा वार्ता गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको थियो । विप्लव समूहसँग सरकारको वार्ता चल्दै गर्दा कतिपयले राजनीतिक स्टन्ट गरिएको भन्ने आरोपसमेत लगाए । तर, सरकार र विप्लव दुवै समूहले अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण ढंगले वार्तालाई निश्कर्षमा पुर्याएरै छाडे । फलतः वार्ता सुरु भएको दुई दिनमै तीन बुँदे सहमति भयो । यो सहमतिसँगै सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवासमेत गरेको छ । र, जेलमा रहेका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई रिहाइ गर्ने भएको छ ।